Any Torkia, Eo Am-pitadiavana Olona Bebe Kokoa Manohana Ny Fanomezan-danja ny Tanàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2015 7:16 GMT
Istanbul, Torkia. 23 Aogositra 2013 — Lasa ampahany amin'ny fiainan-piarahamonina ireo faritra misy fandrodanana, toy ireo faritr'i Tarlabasi ao Istanbul izay miatrika tetikasanà fanamboarana goavana. Efa noravàna ireo tranobe rehetra ary efa noesorina ireo olona tao. Handray ny toeran'izy ireo ireo hotely lafo sy toeram-piantsenana lehibe. Demotix ID: 2684393
Mamarana ny fitondràna elan'ny AKP (Antokon'ny Rariny sy ny Fampandrosoana), nanary ny nahamaro an'isa azy tao amin'ny parlemanta, ny Fifidianana Faobe nampientanentana ny 7 Jona tao Torkia. Ao anatin'ny zavatra hafa rehetra, nalaza tamin'ny fanovàna an'i Torkia ho firenenan'ny fanamboarana tranobe ny governemantan'ny antoko tokana an'i AKP; mampidi-bola an-jatony tapitrisa dolara ho an'ireo orinasa mpanorina, ary — lazaina ho — tomponandraikitra lany henatra ao amin'ny fitondràna.
Nanorina fitaovana sosialy maro isika, anisan'izany ireo trano fonenana miisa 577, toeram-pitsaboana iray, ary toeram-pivarotana iray.
Nalàn'izy ireo ny mavo, manga, maintso, volomboasary, volomparasy, mena, ary nosoloiny volontany sy fotsy izy ireny.
Nopotehan'izy ireo ny Sulukule [toerana ao Istanbul miatrika fanovàna lehibe tokoa ankehitriny].
Natao resaka politika indrindra any Torkia ireo hevitra voizin'ilay fanamboarana sy fanomezan-danja kokoa ny tanàna, hatramin'ilay hetsi-panoherana Gezi ny taona 2013, izay nanomboka tamin'ny fifandonana teo amin'ireo mponin'i Istanbul sy ny governemanta, momba ireo toeram-bahoaka.
Ankizy milalao ao Tarlabası. Sary nalain'i Soultana Kabouridou 23 Aogositra 2013. Demotix ID: 2684393.
Roa taona taty aoriana, manohy mifamaly ireo vondrona mpomba sy mpanohitra ny fanomezan-danja bebe kokoa ny tanàna, raha toa kosa mitohy any ambadika ihany ny fifampitoriana any amin'ny fitsaràna momba ilay asa fanamboarana. Raha jerena ny fihetsiketsehana miseho ary na ny herisetra naterak'ireo fifandonana momba ilay asa fanorenana, mipetraka ny fanontaniana: Hisy làlana hivoahana tsy hampiasaina herisetra ve eo?
Mba hahazoana valiny, niresaka tamin'i Bogaçhan Dündaralp ny Global Voices, izy dia mpahay maritrano nahazo loka no sady manampahaizana nandray anjara fototra nandritra ny fanentanana hiarovana ny Kuzguncuk Garden.
Fanakàrana ny fanomezan-danja kokoa ny tanàna
Araka ny Dikisioneran'i Oxford, ny atao hoe fanomezan-danja kokoa ny tanàna dia “ny dingana fanamboarana sy fanatsaràna ny trano na distrika mba hifanaraka amin'ny fitiavan'ny vahoaka eo amin'ny ambaratonga antenantenany izany.” Nandritra izay am-polotaonany lasa izay, naely erak'i Torkia izany, indrindra tao Istanbul. Ireo mponina tany amin'ireo distrika sasany — toa an'i Sulukule sy Tarlabasi — dia nesorina tamin'ireo tranony, tamin'ny alalan'ny fitambaran'ireo fiangaviana sy fanerena nataon'ireo mpanatsara, izay mitady ny hampakàrana ny lanjan'io toerana miavaka io. Milaza ireo mpitsikera ilay dingana hoe mampitombo bebe kokoa ny tsy fitoviana ara-tsosialy sy ara-toekarena ary tsy miraharaha ny fiarovana sy ny fifalian'ireo olona mipetraka eo amin'ireo toerana ireo ilay endriny mihazakazaka be loatra sy miompana fotsiny any amin'ny tombontsoa.
Hazavain'i Bogaçhan Dündaralp ny fomba mety hamoronan'ny fanovàna mihazakazaka ho amin'ny tsaratsara kokoa ny fahasimbàna lavitr'ezaka eo amin'ny fiarahamonina :
Raha jerentsika ny fototry ny hoe fampanànan-karena [fanomezan-danja bebe kokoa], hitantsika fa avy amin'ny teny hoe manan-karena io, ary milaza fanamboarana ireo toerana izay azo omen-danja ao amin'ny tanàna iray izany, [ary midika ho] fanavaozana azy ireny hifanaraka amin'ny sàtany sy ny lanjany ara-toekarena. Miova ny vokatry ny fanatsaràna ny tanàna raha misy antokon'olona efa nonina teo mifandringotra amin'izany. Amin'izany, mety hanana toetranà fampiasam-pahefàna ilay fanatsaràna ny tanàna, ary hampisy olana ao anatinà sary lehibe kokoa. Satria raha ny resaka toekarena fotsiny no jerena — raha toa ka tokony hoe ny lafiny rehetra — esorinao fotsiny izany ilay toerana noho ny zavatra manjavozavo, lanjany araky ny kajikajy tsotra izao, ary manadino na mandà ny handoa ny mety ho vokany izay mety hiseho ivelan'ny zava-misy ara-toekarena ianao.
Iza no aiza?
Hamafisin'i Dündaralp fa olona tafita sy hajaina tokoa ireo mpahay maritrano izay mandray anjara amin'ireo tetikasa ireo toy ny an'i Tarlabasi. Rehefa miresaka amin'izy ireo ianao, ny tohan-kevitra entin-dry zareo handresen-dahatra dia ny hoe tsy tena avy any Tarlabasi akory ireo olona monina ao Tarlabasi ireo, noho izany, rehefa mandeha ny fanamboarana haingana ho tsaratsara kokoa ny tanàna, tsy fahaverezana ara-tantara ny famindràna azy ireo avy amin'ny toerana iray.
Kanefa, amim-pahatsapàna tsara tanteraka fa mety ho marina amin'ny ampahany ireo teboka ireo, mbola mamorona tambajotranà fifandraisana ihany ireo mponina ireo any amin'ny faritra mpifanolo-bidirindrina manokana — tambajotra izay simba rehefa niditra niaraka tamin'ny fiara vy mpandrodana ireo orinasa mpanorina trano. Rehefa nafindra tany amin'ny trano vaovao ivelan'ireo distrika nisy azy teo aloha ny olona, tsy afaka nitondra io tambajotra niankinan'ny fiainany io niaraka taminy izy ireo, hoy izy. Ny fahombiazan'ny fanomezan-danja kokoa ny tanàna dia mitaky fametrahana fifampiresahana eo amin'ireo ankolafy isan-karazany, tafiditra amin'izany ireo mponina, mpanao maritrano, orinasa sy ireo Fikambanana Tsy Miankina amin'ny Fanjakàna, izay samy mahatakatra tsara sy mandinika ifotony eny an-toerana mihitsy amin'ny fomba fijery samihafa.
Tsy fahampian'ny fitohizana ara-tantara
Io tsy fahampian'ny fahalalàna amin'ny lafiny maha-zava-dehibe ny ara-tantara na ara-kolontsaina apetraky ny olona amin'ny toerana iray io, izany no mahatonga ny fizotry ny fanomezan-danja ny tanàna any Torkia ho tena lasa olana lehibe, hoy i Dündaralp.
Ohatra iray amin'izany izao ny fanandramana vao haingana hamotika ny Camp Armen, toerana izay tena manan-danja tokoa ho an'ireo Armeniana, toerana izay nitoeran'ireo ankizy mahantran'i Anatolia — sy i Hrant Dink ary ny vadiny Rakel— fony izy ireo voatery nifindra tany Istanbul tao antenantenan'ny taona 1960 sy 1980.
Na dia natsahatra aza ilay famotehana noho ny ezak'ireo mpikatroka mafana fo maro, mbola tsy fantatra ny hoavin'ny Camp Armen.
Nilaza izao i Dündaralp:
Inona no mitaky fiarovana? Inona no zavatra tena tiantsika harovana ao anatin'ny taranaka mifandimby? Inona no tokony harovantsika mba hamokatra ny lanjan'ny toerana iray miavaka ?
Tsy ampy hametrahana io fitohizana io ny fiarovana fotsiny ny endrika mivaingana azo tsapain-tànan'ny tantara. Ny mandinika ny fomba fijery ireo tambajotra sy fifandraisana nahatonga io toerana io ho toy izao no tena zavatra lehibe.
Amin'ny lafiny iray, misy ireo filàna sy zavatra andrasana ankehitriny. Fa fomba fiasa tena mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra ataontsika amin'izao fotoana izao mihitsy izany hoe mamaly ny zavatra andrasana ankehitriny sady mampiditra ny fomba fijery ny fitohizana ara-tantara eo anivon'ireny fifandraisana ireny.
Hazavain'i Dündaralp fa raha mijery ny lafiny ara-toekarena fotsiny ny olona, vahaolana ara-toekarena fotsiny ihany koa no afaka vokariny. Mitaky fanadihadiana amin'ny antsipirihany mihitsy ny fahatsapàna ny maha-izy azy voarafitra tao anatin'ny toerana iray. Mandritra io dingana io, mety ho azo aseho ireo toerana tena manan-danja be tokoa izay azon'izay olona rehetra manam-paniriana te-hanaisotra azy esorina tsotra fotsiny. Tokony hajaina ny dikan'ireny toerana miavaka ireny ary ezahana ny hanome fahafahampo ny filàna ankehitriny ao anatin'izay zava-misy eo, fa tsy hoe manova tsotra izao fotsiny ny dikan'ireo toerana ireo ho an'ny tombotsoa.
Mety hisy resaka fifanarahana ve?
Ankehitriny, araka an'i Dündaralp, ny tena olana goavana eo amin'ny firesahana ireo fanovàna miseho ao anatiny sy manodidina an'i Istanbul— na Torkia — dia ny hoe samy misintaka eny amin'ny zorony azy avy ny tsirairay, ary mitazona mafy tsotra izao ny heviny sy ny fijeriny avy, tsy mamela toerana ho an'ny fifampiresahana sy ny fanelanelanana. Raha toa ka tokony hisy ny kolontsainan'ny fifampiraharahàna, lasa ny fomba fisainana mitazona ny fomba fijeriny manokana no lalàna nipoitra, manaisotra ny fifampitokisana sy ny fifankahazoana. Noho izany, maro ireo olona afaka miasa miaraka no mijoro mifanome lamosina.
Nahita io fiziriziriana misy io i Dündaralp, raha nandray anjara tamin'ny fiampiraharahàna momba ny Zaridaina Kuzguncuk:
Ohatra, nandritra ny firesahana teo amin'ireo mponin'i Kuzguncuk sy ny Tomponandraikitra Monisipaly, naniry hiditra ihany koa ireo mpiaro ny tontolo iainana tamin'ny fitenenana hoe ‘zaridaina io, toerana maintso ka tokony hijanona amin'izany, tsy tokony hisy afaka miditra eo.’ Ankehitriny, raha fantatr'izy ireo ny 20 taona lasa ao ambadik'io zaridaina io, tsy niteny zavatra toy izany mihitsy izy ireo. Teo amin'ny toeran'izany zavatra nolazainy izany, ho tsapan'izy ireo fa manana ny maha-izy azy lehibe eo amin'ny daholobe io zaridaina io.
Ankehitriny, mijery ilay zaridaina ianao, eo ny olona no manao ny fanatanjahantenany ny maraina, nanomboka mampiasa io bebe kokoa ihany koa ireo olona be taona, eo foana ireo ankizy raha vantany vao tafavoaka ny sekoly, mitohy ny fambolena, ary napetraka ho toerana maintso ny lafiny avo aminy. Raha ny sary lafatra amin'ilay zaridaina, samy manana ny fomba fijeriny sy ireo fanehoan-keviny samihafa daholo isika rehetra. Mety hoe tsy hisy hilaza ilay zaridaina eo ankehitriny hoe ‘tena toy izao mihitsy no nieritreretana azy!’ Tsy dia tsara io ho an'ny sasany amintsika, ho an'ny sasany amintsika kosa mihoatra noho ny nosanina io.
Kanefa ny tena zava-dehibe, samy nifanaiky taminà teboka iray voafaritra isika: Avotra amin'ireo fandrahonan'ny asa fanorenana ilay zaridaina, ary manohy manome toerana hatrany ho an'ireo daholobe sy ny fambolena. Nampiasaina tamin'ny fandaminana rehetra ny vokatra natoraly […] Ny fahafahana manao io endrika iombonana io avy amin'ireo fomba fijerintsika samihafa no tena zava-dehibe.
Amin'izao aloha, ny fijerena ifotony fa tsy ny lalàna no vahaolana hita tamin'ilay olan'ny Zaridaina Kuzguncuk, saingy mbola resy lahatra hatrany i Dündaralp fa afaka mitondra ho amin'ny fiovàna lehibe ireo ohatra madinidinika.